DHEGEYSO: ”Haddii Axmed Madoobe Muqdisho soo maro miyaa la xirayaa?!” – Waxaa ka jawaabaysa DF Somalia | Hadalsame Media
Home Wararka DHEGEYSO: ”Haddii Axmed Madoobe Muqdisho soo maro miyaa la xirayaa?!” – Waxaa...
DHEGEYSO: ”Haddii Axmed Madoobe Muqdisho soo maro miyaa la xirayaa?!” – Waxaa ka jawaabaysa DF Somalia
(Muqdisho) 19 Sebt 2019 – Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Hawada Soomaaliya Maxamed Salaad Oomaar ayaa ka hadlayey go’aankii dowladda ay soo saartay ee la xiriiray duulimaadyada Kismaayo.
Hoos ka dhegeyso Wasiirka oo u warramaya weriyaha VOA u fadhiya Muqdisho, Cabdulqaadir Maxamed Cabdullaahi.
Previous articleDHEGEYSO: Dhibaatada aan ka hari doonin ee ay DHIIG yarida haweenayda XAAMILADA ihi u gaysato ubadka caloosha ku jira (Daraasad)
Next articleFASHIL: Maraykanka oo qirtay inuu shaqayn waayay hannaanka daafaca cirka ee Patriot ee Sucuudiga (Maraykanka oo faro hor leh u taagey Sucuudiga)